Aaliwwan Oromoo sadeen Toophiyaa bulchan -
bilisummaa April 4, 2018	Leave a comment
1. Ras Alii Warra Ejjuu 1819-1866
Mootii warra Ejjuu kan haada isaa Giiftii Manan waliin Ejju irra dabree Abiisiiniyaa bulchaa turee dha. Ifatti amantii Kiristaanaa fudhateera jedhama, iccitiidhaan garuu Musliima jedhamee hamatama ture. Haatahu malee warri Abiisiiniyaa zamana bulchiinsa isaa fi kan Alii isaan dura turee beekkamtii dhowwatanii ‘Zemene Mesafint (Era of Lords)’ jedhanii moggaasan. Giddu galeessa bara 1850ootaa keessa kan ka’e Tewodroos bulchiinsa warra Alii cabsee Alii fi haadha isaas booji’ee salphise.
2. Iyyaasuu Mohammed Alii – 1913 -1916
3. Abiyyi Ahmad Alii 1976 –
Zamana Oromoon wal quba qabuu fi waliin qabsoo mirga isaa godhu keessa dhalate. Hiree gaarii argate kanati fayyadamuun aangoo siyaaasaa Itoophiyaa qabate. Bara jireenya isaa keessatti mootummaa Tigree EPRDF jedhamu keessatti waan dabarseef muuxannoo achi keessatti kuufate qabatee aangoo qabachuuf of qopheesse. Ebla 2, bara 2018 Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa tahuun moggaafame. Milkoomina isaaf qabsoon Qeerroon Oromoo godhe sababa guddaa ture. Akkasuma Abiyyi Alii sadarkaa kanaan gahuu irratti tarsiimoon jaala isaa Lammaa Magarsaa kan yeroo sanatti bulchaa Oromiyaa turee haalaan murteessaa akka tahe hayyoonni seenaa irratti walii galu. Abiyyi Alii maatii Musiimaa fi Kirstaana tahan keessaa waan dhalateef hariiroo hawaasota lamaanii jabeessuuf hojii milkaawaa akka hojjetetti beekama. Seenaa isaa keessatti hoggana Oromoo yeroo duraaf huccuu aadaa Oromoo masaraa mootummaa Itoophiyaa Shaggar seensise tahuun beekama. Seenaan Abiyyi Alii bifa kanaan eegale eessatti akka dhaabbatu seenaatu gara fuulduraaf barreessa.
Sadanuu maatii Alii jedhamu keessaa bahan. Sadanuu warra sirna mootoma gonfoo (monarchy) shaakaluu ture keessaa dhalatan. Sadanuu amantii lamaan (Islaamaa fi Kiristaana) walitti dhiheessanii laalu, hundaan walii galu. Sadanuu warra aangoo mootummaa Itoophiyaa qabachuuf carraan isaan daaw’attee dha. Sadanuu Oromoo waan tahaniif warra hidda Kaabaa harkaa haangoo fudhachuuf laaftuu itti hin taane. Alii inni boodarraa kufaatii Aliiwwan duraa lamaan irraa barumsa fudhachuu danda’a. Raas Alii fi Iyyaasuu Mohammed Alii Oromoo saba isaanii birmachiifachuu waan hanqataniif harka alagaatiin dhahaman. Abiyyi Ahmad Alii yoo itti fayyadame carraa guddaa qaba. Bara sabni isaa dammaqiinsaa fi tokkummaa jabaa qabu keessa ka’e waan taheef haala saba isaa hin mufachiifnetti sochoonaan seenaa Oromoo biyyattii sana keessatti barreessee darba. Yoo hunda gammachiisuuf rakkachuutti saba sadarkaa kanaan isa gahe xiyyeeffannoo dhorkate garuu fagoo deemuu hin danda’u.
Previous No Lesson Learned from Rwanda and Darfur GENOCIDES
Next An eastern problem for Ethiopia’s new leader